Zonguldak Bülent Ecevit University dia handray mpiasa mpiasa akademika - RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYJobsZonguldak Bülent Ecevit University dia handray mpiasa staff akademika
zonguldak bulent ecevit universite dia handray mpiasa akademika
Zonguldak Bülent Ecevit University dia haka mpiasa akademika; Ny lalàna momba ny fomba fanao sy fitsipika momba ny fanadinana foibe sy fanadinana fidirana izay ampiharina amin'ny fanendrena any amin'ireo mpiasa an-trano hafa ankoatry ny mpiasan'ny Akademia navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy nomen'ny 09.11.2018 sy 03.10.2019 ho an'ny fangatahana sy fanendrena tokony hatao amin'ny mpiasa akademika izay nambaran'i Zonguldak Bülent Ecevit University.
Daty fanombohana fampandrenesana: 05.12.2019
Fe-potoana fampiharana: 19.12.2019
Daty fanamarihana momba ny valin'ny mialoha ny fanombohana: 25.12.2019
Datin'ny fanadinana miditra: 30.12.2019
Daty famaritana ny valiny: 07.01.2020
Ny vanim-potoana fampiharana dia 15 andro manomboka amin'ny fotoana namoahana ny dokam-barotra.
Araka ny fepetra ankapobeny sy manokana ny fampiharana, ny mpangataka ampiharina amin'ny mpiasan'ny fakiolahana dia asiana mametraka ireto antontan-taratasy manaraka ireto amin'ny fangatahan'izy ireo alefa any amin'ny biraon'ny Dean na ny Sekolin'ny fampianarana ambony;
2- Kopiary momba ny karatra famantarana,
3- Saripikan'ny mari-pahaizana Bachelor's, Master's and Doctorate na diplaoma amin'ny diplaoma amin'ny E-Government,
4- Fandraisana sary, Master sy Doctoral Transcriptop,
5- Saripikan'ny fanamarinana momba ny fiteny vahiny
6- Sary iray,
8- Taratasy fanamarinana afovoany (ALES),
9- Taratasy fisoratana anarana momba ny mpitsara (1 (iray) isam-bolana)
10- antontan-taratasy milaza fa ny fanompoana miaramila dia rava, hahemotra na esorina amin'ny kandida lehilahy,
11- Taratasy momba ny serivisy serasera / traikefa nankatoavina,
12- Fomba fampiharana (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html Dia omena amin'ny adiresy.) Ny hoe nanambara mampihatra.
- Ny fampiharana dia tsy maintsy atao samirery na amin'ny mailaka.
- Tsy ekena ny fahatarana amin'ny lahatsoratra na tsy ekena ny fampiharana raha tsy misy ny antontan-taratasy etsy ambony.
- adiresy Internet izay hanambarana ny valiny: http://w3.beun.edu.tr
- Ny 1 (olona iray) dia tsy afaka mihatra amina mpiasa mihoatra ny iray ao anatin'ny fotoana iray. Ny fangatahana ireo kandidà izay hita fa mihatra amin'ny mpiasa mihoatra ny iray dia nofoanana.
- Ireo izay hita fa nanao fanambarana diso ao anaty antontan-taratasy takiana dia raisina ho tsy manan-kery ary tsy hotendrena. Na dia notendrena aza izy ireo dia ho foanana ary tsy afaka mitaky zo intsony izy ireo.
- Ny Anjerimanontolo ananantsika no manana zo hanao fanovana amin'ny alimanaka fanadinana ary hanafoana ny dingana rehetra amin'ny fanambarana. Ny fampandrenesana rehetra atao amin'ny tranokalan'ny oniversite dia ampandrenesina. Tsy tokony hisy fampandrenesana an-tsoratra omena an'ireo olona ireo.
(1) Amin'ny fanendrena hatao amin'ny mpiasa akademika ao ambadik'ity fitsipi-dàlana ity;
a) hanatanteraka ireo fepetra voatondro ao amin'ny Article 657 ao amin'ny lalàna momba ny mpiasam-panjakana No. 48,
b) isa amam-pahamarinana 70 kely indrindra avy amin'ny ALES, isa ambany indrindra amin'ny 50 avy amin'ny fanadinana fiteny vahiny afovoany eken'ny Filankevitra Ambony amin'ny fampianarana ambony na ny isa mitovy amin'ny fanadinana mitovy. Ny isa ALES dia heverina ho 70 amin'ny dingana mialoha ny fanombanana sy ny fanombanana farany amin'ireo mpampiasa izay maniry hahazo tombony amin'ny fanavotana foibe.
(2) Amin'ny fanapahan-kevitry ny Antenimierandoholona, ​​oniversite sy ny teknolojia avo lenta dia mety hamaritra isa mihoatra ny ALES sy ireo tohodrano miendrika fiteny vahiny voafaritana ao amin'ity Lalana ity, afa-tsy ho an'ny mpampianatra mpampianatra amin'ny sehatry ny sehatra manokana voafaritry ny filankevitry ny fampianarana ambony any amin'ireo sekoly mampihetsi-po.
(3) Azo ampiasaina amin'ny kajy ny mari-pahaizana diplaoma amin'ny ambaratonga mialoha sy ny fanombanana farany
Ny fitoviana amin'ireo rafi-pandrefesana 4 sy ny 5 amin'ny rafitra laharana 100 dia voafaritra amin'ny fanapahan-kevitry ny Filankevitra ambony. Ny fitovian'ireo rafitra grading hafa amin'ny rafi-panangonana 100 dia voafaritry ny senatera ao amin'ny fampianarana ambony.
(4) Ireo mpifaninana, amin'ny fandaharam-pianarana amin'ny fiteny ho an'ny fanabeazana sy fampianarana izay homena ny mpiasa mpampianatra amin'ny fanendrena ny programa dia hotanterahina amin'ny fiteny fampianarana; Ao anatin'ireo fanendrena izay hatao amin'ny mpiasa mpampianatra araka ny andalan-tsoratra (i) ny andalana voalohany amin'ny lahatsoratra 4 amin'ny 11 / 1981 / 2547 daty ary 5 / 80 / XNUMX, ny fanendrena izay tokony hatao amin'ny mpampianatra mpampianatra amin'ny fiteny mifandraika; Amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fanendrena ireo sekoly ambony amin'ny fampianarana ambony, ny mpampianatra hampiasaina amin'ireo vondrona ampiharina amin'ny fiteny vahiny dia takiana hahazoana XNUMX iray farafahakeliny XNUMX avy amin'ny foibem-piteny vahiny afovoany eken'ny Filankevitry ny Fampianarana ambony na ny isa mitovy amin'ny fanadinana izay ekena ho mitovy.
Ao amin'ny fangatahana ireo nahazo diplaoma tsy tesis amin'ny mpiasa mpampianatra; Ny fepetra omen'ny lalàna mifehy ny volavolan-dalàna momba ny fanovana momba ny fomba fiasa sy fitsipika momba ny fanadinana foibe sy fanadinana fidirana ampiharina amin'ny toeran'ny mpiasa akademika ankoatry ny mpikamban'ny mpampianatra izay namoaka tao amin'ny Gazety ofisialy voatondro 03.10.2019 dia tokony hampiharina.
(1) Ireo izay hotendrena ho any amin'ny sehatry ny asa manokana voafaritry ny filankevitry ny fampianarana ambony momba ny oniversite asa dia tsy maintsy manana mari-pahaizana master na manana roa taona farafahakeliny ao an-tsaha raha toa ka mahazo diplaoma izy ireo.
(1) Ny fangatahana fanadinana foibe dia tsy takiana amin'ireo izay nahavita ny fahazoana ny diplaoma na ny fitsaboana, ny mpitsabo nify, ny fivarotam-panafody ary ny fahaizam-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny biby, izay ho voatendry any amin'ireo faritra manokana ho an'ny sekoly bokim-pahalalana voafaritry ny filankevitry ny fampianarana ambony, ary izay efa niasa na niasa tamin'ny mpiasa akademikan'ny andrim-pampianarana ambony.
(2) Ny oniversite diplaoma dia omena ny mpiasa mampianatra afa-tsy ho an'ny mpampianatra mpampianatra ao amin'ny andalana fahefatra amin'ny lahatsoratra 6 amin'ity fitsipika ity.
takiana amin'ny teny vahiny dia tsy takiana amin'ny fangatahana.
MINISITERAN'NY Izany no nampianatra. YDS NA VEHIVAVY EQUAL DESCRIPTION
SCHAYCUMA TOKO VOKASIKA
CIVIL AIR TRANSPORTATION MANANA 1 Hahazo diplaoma amin'ny departemanta misahana ny fitantanana sivily na ny departemanta misahana ny fiaramanidina fiaramanidina. Ny fananana ny mari-pahaizana mahefa amin'ny sehatra mifandraika
1 50 Fitaovana informatika, informatika informatika, informatika informatika, informatika informatika, informatika informatika informatika, informatika informatika informatika, science science and engineering, engineering engineering, electronic engineering, electrical-electronic engineering, electronic-komunikasi, engineering, informatika informatika sy teknolojia fanabeazana. Fahazoana diplaoma amin'ny iray amin'ireo programa undergraduate ary hahazoana mari-pahaizana farafaharatsiny ho an'ny mari-pahaizana mifandraika amin'izany ((ho tendrena ao anatin'ny ambaratonga fakana mpampianatra izay hiasa ao amin'ny sehatr'asa ao amin'ny Rectorate.)
1 50 Mba ho mari-pahaizana diplaoma amin'ny fiteny Tiorka sy ny literatiora na ny fampianarana amin'ny teny Tiorka ary hanana mari-pahaizana tompo amin'ny sehatra mifandraika (Torohevitra momba ny fampianarana Tiorka (TÖMER).
SCHAYCUMA TOKO VOKASIKA FAMPISEHOANA NY FIVORIANA SY FIKAMBANANA
TEKNOLAHANA LABORATORY 1 Nahazo diplaoma tamin'ny sampana momba ny biolojia. Ny mari-pahaizana diplaoma biolojika molekular na biolojika molekular sy genetika ary ny mari-pahaizana PhD ao amin'ny molekiola bietika sy ny fototarazo. Manamarina fa ny fianarana biochemistry sy Fisiôlôjia dia za-draharaha amin'ny fampiharana amin'ny laboratoara ary nofana tamin'ny fanazaran-tena amin'ny laboratoara, fahaiza-manao fanandramana ary fanaovana calibration.
Nifarana ny fifaranan'ny fifaranan'ny Ecevit Salihli Bülent
Bülent Ecevit Intersection no mandeha miadana